Qorshuhu wuxuu ahaa in ina Qaybdiid la dilo balse Qadarta ayaan dhamaan - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeMaqaaloQorshuhu wuxuu ahaa in ina Qaybdiid la dilo balse Qadarta ayaan dhamaan
Faysal Cali Siyaad
Ciidamo aad u hubaysan oo ka socday dowladda Soomaaliya ayaa loo diray guriga Senatar Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid si ay u soo dilaan maadaama lagu tuhmayey inuu guriga joogo.
Ciidankaas ayaa markii ay tageen guriga masuulka gaari ku dhuftay ganjeelka si degdeg ahna u dhexgalay guriga oo ay joogeen dhowr wiil oo ilaala ah balse aan dagaal waqtigaai u diyaarsanayn maadaama uu maqnaa masuulku.
Hubkii ayay ka dhigeen ilaaladii kadibna guriga ayay gudaha u galeen iyagoo muqul ku jebiyey gabadha uu qabay masuulku sidoo kalena ka qaatay marwadaas iyo gabar uu dhalay Cabdi Qaybdiid taleefoonadii gacanta, kuna amray in dhulka dhambacaadsadaan.
Ciidamadaas ayaa kadibna bilaabay in ay jejebiyaan albaabadii guriga iyo armaajooyinkii iyagoo meel walba fatashay isla markaana qaatay wax kasta oo ay is lahayeen qiimo ayay goyn karaan ama ay gacmaha ku dhigi kareen.
Ciidamadaan oo ay soo direen masuuliyiinta ugu saraysa Dowladda Soomaaliya iyo Xeer ilaaliyaha qaranka oo kaashanayey saraakiil hoosaad kasoo jeeday beelo kale ayuu qorshahoodu ahaa in ay dilaan Cabdiqaybdiid isla markaana ay ku andacoodaan inuu dagaalamay balse qadarta ayaan sidaa ahayn.
Madaxdii sare waagii ayaa ku baryey markii ay ka war heleen fashalka dhacay waxayna ku af gobaadsadeen in baaris degdeg ah la sameeyo lana soo qabto cidii ka dambaysay falkaasi, taasoo ahayd afgobaadsi iyo been guur lagu qaldayo dad badan. Waxaase sidoo kale hadlay masuuliyiin dowladda ka mid ah oo ay arrintaasi daacad ka ahayd una haystay in aanay madaxdooda sare waxba ka ogayn kuwaas oo iyaguna ku baaqay in tallaabo laga qaado ciddii falkaasi ka dambaysay.
Dhacdadaani waxay la mid ahayd tii lagu weeraray gurigii Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo lagu dilay dhamaan ilaaladiisii iyo gabar isna lagu dhaawacay. Cabdishakuur oo la dili rabay markii ilaalada iyo gabadha la soo dilay si aanay u marqaati furin ayaa markii qolka loogu galay waxaa loogu tegey goobtaas rag badan oo aan lagu talo gelin oo la joogay.
Taladii ayaa ku cadaatay raggi soo dila la yari, haddii ay dilaan waxaa hadhow arrintaas ka marqaati furaya masuuliyiinta siyaasiga la joogtay oo beelo kale ka tirsanayd, haddii ay masuuliyiintaas dhamaan xasuuqaana waa khatar aan laga soo waaqsan oo dowladdii soo wajahday.
Waxaa qasab ku noqotay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur la xiro isagoo dhaawac ah oo dhiig baxayey. Mdaxweynaha, Ra’iisal wasaaraha iyo Xeer Ilaaliyaha guud oo dhamaan falkaan wada ogaa ayuu waagii ku baryey markii fashilku dhacay, waxayn ku adkaysteen inuu siyaasigu khiyaano qaran galay, taasoo macnaheedu yahay weeerarku sax buu ahaa.
Markii dembi lagu waayey qaadigiina uu ku gacan sayray 100 kun ee doolar ee ay masuuliyiinta dalka ugu saraysaa laaluush ahaan ugu talo gashay, waxay ku adkaysteen mar kale in aan xukunka maxkamadda Banaadir waxba ka jirin, waxayna amar hoose siiyeen maxkamaddii racfaanka oo furtay dacwo degdeg ah oo ka dhan ah siyaasiga. Waxaa taa ka sii darayd oo cuqdad iyo cadaawad xeel dheeraatay ahaa markii ay Farmaajo iyo saaxiibadii diideen in la aaso 5 tii wiil iyo gabadhii lagu dilay guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay 6 dii mayd hal god ku wadashubeen eheladoodiina u diideen in ay arkaan. Waa arrinta ilaa iyo hadda aan jawaab loo hayn. Isla askartii loo wakiishay xaquuqa ilaaladaas ayaa laga soo xigtay qaarkood in ay dheheen markaan godka kuwada shubnay lixda qof laba ayay wali nafi ku jirtay oo nuuxsanayey.
Hadaba Ilaah dile ayaa dhinta Cabdi Qaybdiid haddii ay dili lahayeen warku wuxuu ahaan lahaa qiyaamo qaran ayuu galay ciidamadii loo dirayna waa uu la dagaalamay balse markii masuulka gurigii laga waayey sheekada dhinac kale ayaa loo rogay oo ah degdeg u soo baara ciddii ka dambaysay.
Waxaa la isla dhex marayaa in ay dowladdu durba diyaarisay qorshe been iyo dhagar ah oo ciidamo iyo saraakiil ay wax isla ogyihiin loo diyaarinayo in ay dembi beena isku qiraan si umadda looga sii jeediyo masuuliyiinta sare, dadkaan dembiga isku qirayana loo balan qaado nolol wanaagan iyo xabsi muddo kooban ah.
Waa sida sheekadii markii qaray dhaco lasoo qaban jiray ciyaal xaafadeed aan way ogayn si loogu saan tirto dembiilaha loo adeegsaday falkana loo badbaadiyo. Haddi caqli idinku dambeeyo xisaabtama soomaaliyeed, laba dhacdo oo isku mid ah oo muddo 3 asbuuc ah gudahood la fuliyey waa arrin qof kastaaba uu fahmi karo.
Taas waxaa ka daran qaraxii Zoobe ee 500 oo qof ay ku dhinteen muu ahayn mid ay Alshabaab ka dambaysey. War gayska Antiwar ayaa wuxuu qoray in aanu qof isku qarxin gaarigii dadku ku halaagsameen oo uu darawalku ka degey meel fogna laga qarxiyey, ayna dhici karto in dowladda Soomaaliya wax ka ogayd, wuxuuna wargaysku sabab uga dhigay iyadoo ay ciidamada dowladdu xireen goobtii ay wax ka dhaceen islaa markiina ay xaaqeen si aan aad iyo wax la baaro loo helin.
Waxaa kale oo shaki lahayd Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo wargays waraysi siiyey oo yiri waxaa qaraxaas ka dambeeya dadkii eheladooda lagu xasuuqay Bariire oo uu ula jeeday Habargedir. Waa wax caqliga ka fog, Habargedir haddii Bariire lagu laayey ma habargedir kale ayay bartilmaameedsadeen, waxay ahayd taasi figrad gurucan.
Mdaxweyne Farmaajo ayaan ka yaraysayn seedigiis Kheyre oo isna ku baaqay mudaarahaadyo ilmo iyo dumar u badnaa oo uu abaabulkooda lahaa kuwaas oo iskugu soo baxay Muqdisho, mar uu la hadlayey ayuu yiri qaraxa Zoobe waa midkii na midayn lahaa, taasoo uu ula jeeday in uu taageero ka heli doono dad badan oo ka soo horjeeday si ay cadaw kale u yeeshaan.
Markii uu Farmaajo u dhiibay Itoobiya Halgame sarkaal sare Qalbi Dhagax ayay dad badani kala laabteen taageeradii wuxuuna doonayey inuu helo taageero cusub kuna heli boqolaal qof oo aan wax galabsan oo dhiigooda la daadiyo.
Hay’adda Amnety International oo ku baaqday in lakala diro Liyu Booliiska kilinka 5aad